Uyisebenzisa kanjani i-App Launcher: Iqhosha lokuqala le-Chromebook
Phakathi kweempawu kwicala lasekhohlo lesikrini seChannelbook kukho i icon ebonakala ngathi yigridi yeebhokisi ezisithoba. Le yi icon yakho yokuSebenzisa iApp, ngokuthelekiswa neqhosha lokuqala kwiWindows. Xa ucofa i icon ye-Launcher ye-App, utyhila ifayile ye Isiqalisi seApp, iwindow pop-up enezicelo ezininzi.
Kude kube ukongeza ii-aplikeshini ngokwakho, ekuphela kweapps ezibonakala apha zezizenzekelayo eziza nomatshini wakho kunye nazo naziphi na iiapps esele zidibene neakhawunti yakho kaGoogle.
Zulalela isiQalisi se App
Isiqalisi se-App sinokuqulatha ukuya kwii -apps ezilishumi elinesithandathu. Njengoko ufaka usetyenziso, i-Chrome OS iya kongeza iiwindows ezongezelelweyo ukuze ziqulathe usetyenziso lwakho. Xa unezicelo ezingaphezu kwe-16, amaqhosha amile okwemiqolo ethe tyaba aya kuvela ezantsi kwesikrini.
La maqhosha abonisa ubukho beewindows ezongezelelweyo zezicelo. Umbala weqhosha ubonisa ukuba yeyiphi iwindow esebenzayo. Ungahamba phakathi kweefestile ngokunqakraza kula maqhosha.
Hlela uMqalisi weApp
Ukuba uthanda ukugcina izinto ngokulandelelana okuthile, uyakuxabisa ukukwazi ukuhlela i-App Launcher njengoko ubona kufanelekile. Cofa nje ngokulula kwisicelo kwaye usirhuqe ngefestile kude kube kulungelelwaniso olunqwenelekayo. Ungasusa usetyenziso phakathi windows kwifolda yeapp ngokulandela la manyathelo:
Cofa uze ubambe i icon yesicelo onqwenela ukuyisusa.
Tsala i icon kwicala lefestile apho ungathanda ukubeka khona isicelo sakho esikhethiweyo.
Linda ngomonde ide ifike iifestile.
Beka kwindawo oyifunayo.
Xa ugqibile ukubrawuza iiapps zakho, ungavala i-Launcher ye-App ngokunqakraza ngaphandle kwayo okanye ucofe i icon ye-App Launcher kwishelufa yakho.
indlela yokwenza i-bead jewlery
Iimpawu zokulunywa ngumhlolokazi omnyama
amayeza okuba sexesheni
ubisi lwe-magnesia lweentsana
Ukwahlula isikrini kwi-el capitan
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeepherokhethi